မကြောက်ဘူး (ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ပြောသွားသည်)
လင့်ယူသွားတယ် .. ကိုယ်ကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး .. သူများပြမလို့ :P
ဘယ်ရမလဲ.. အဆုံးထိရအောင် ဖတ် ဖတ် သွားတယ်ကွ..ကွ
တို ့လည်း မိုးခါးလိုပဲ လင့်တွေယူသွားတယ် သူများတွေလျှောက်ပြဖို ့:P
ကြောက်တတ်လွန်းလို့ သွားမဖတ်တော့ပါဘူး..ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိတယ်.. ဆရာကြီး ဒဂုန်ရွှေမျှားရဲ့ “ညမဖတ်ရ” ဖတ်ပြီးကတည်းက ကြောက်တတ်တာ အခုထဲပဲ.. :D
first time visit but I have put your blog in favorites. good posts buddy. thanks.
ဟုတ်တယ် တို့လဲဆင်ဆင်လိုဘဲ ... ညမဟုတ်လို့ဖတ်သွားတယ်။
ကျနော်က အဲဒါတွေကို အထူးကြောက်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ဖတ်မကြည့်ဖူးဘူး
ကြောက်တော့ ကြောက်တယ်။ စိတ်လည်းဝင်စားတယ်။ အမြည်းလေး သွားဖတ်ကြည့်အုံးမယ်။ :D
သိုက်တူတဲ့အကြောင်း၊ ပီယဆေးဖော်တဲ့ အကြောင်း ဝတ္ထုတွေ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ဖူးတယ်။ အခုကတော့ သရဲတော့ မယုံဘူး။ ဒါပေမယ့် သရဲကား၊ သရဲဝတ္ထုမဖတ်ဘူး။ ပြီးရင် တပါတ်လောက် ကြောက်နေလို့။
သရဲဝတ္ထု သရဲကား မကြည့်ဖူးဘူး... x file လောက်နဲ့တင် ကြောက်နေတာ
bro.. Human audible range is 20Hz to 20kHz. juz sharing. :) (es)